Iyi webhusaiti inoendeswa ne www.myweedseeds.com - www.myweedseeds.com
Paunoshanyira ino webhusaiti www.myweedseeds.com inogona kuunganidza rako pachako nezve iwe, kana zvakananga (kwaunobvunzwa kuti upe iyo data) kana zvisina kunangana. www.myweedseeds.com, zvisinei, zvinongoshandisa izvi zvemunhu zvinoenderana nezvinangwa zvakatarwa muPezvakavanzika Chirevo ichi uye chakazvipira kuchengetedza ruzivo rwega rwunounganidzwa. Chirevo ichi chinoburitsa zvinangwa zve www.myweedseeds.com kugadzira data maererano newebhusaiti ino, mashandisirwo emakuki uye maitiro aungaita kodzero dzako maererano nedata rako.
www.myweedseeds.com inounganidza uye kugadzirisa ruzivo nezve vatengi uye vashanyi kune yayo webhusaiti kuitisa bhizinesi rayo, kuzivisa uye kugadzira zviripo zvigadzirwa uye masevhisi angave anonakidza iwe uye nekuvandudza kwewebhu webhu. Ruzivo iwe rwaunopa rwuchashandiswa kutaura newe pazvinenge zvichidikanwa, semuenzaniso kukuzivisa iwe nezvekushandurwa kwekushanda kune webhusaiti uye kupa masevhisi aungawana achibatsira (chero usina kusarudza kugamuchira masevhisi akadaro).
www.myweedseeds.com haitsvage kuunganidza zvakavanzika zvemunhu data (senge data rinoburitsa mafungire ezvematongerwo enyika, zvitendero zvezvitendero kana data zvine chekuita nezvehutano kana hupenyu hwepabonde) kuburikidza ino saiti. Kana www.myweedseeds.com ikatsvaga kuunganidza data rakadai, mvumo yako yekutanga pano kuzobvunzwa. Ndokumbira utarise kuti, nekupa www.myweedseeds.com ine isina kukumbirwa data rako pachako unobvumidza kushandisa kwedu iyo data sezvatsanangurwa pamusoro.
www.myweedseeds.com inogona kuunganidza uye kuongorora ruzivo maererano nekushandiswa kweiyo webhusaiti, kusanganisira zita rezita, huwandu hwenhamba, mapeji akashanyirwa, apfuura / akazotevera masosi akashanyirwa uye kureba kwechikamu chemushandisi. Ruzivo urwu runogona kuunganidzwa nekushandisa cookie. Cookie idiki zvinyorwa faira rakaiswa pane rako rakaomarara dhiraidhi newebhu peji peji server. Iwe unogona kusarudza kana kusashandisa cookie nekuchinja marongero e browser yako. Cookie ichaita kuti kushandiswa kwewebhu webhusaiti kukurumidza uye nyore.
Chechitatu bato saiti
Ndokumbira utarise kuti ichi Chakavanzika Chakavanzika hachiwedzeri kune echitatu mapato masosi akabatanidzwa newebhusaiti ino.
Nzira yekutaurisa www.myweedseeds.com
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve ichi Chakavanzika Chirevo kana edu ekugadzirisa data zviitiko, unogona kutibata nesu kuburikidza neyedu kuonana chimiro.
www.myweedseeds.com inochengetera kodzero yekugadzirisa zvikamu zveichi Chakavanzika Chirevo chero nguva. Ndokumbira utarise chirevo ichi nguva nenguva kana paine shanduko.